Dowladda Soomaaliya oo Cambaareysay Weeraradii Shalay Muqdisho Ka Dhacay | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Soomaaliya oo Cambaareysay Weeraradii Shalay Muqdisho Ka Dhacay
Muqdisho (KON)- Dowladda fedraalka Soomaaliya waxa ay cambaareyneysaa weerarkii fashilmay ee shalay lagu qaaday Maqaaxida The Village ee magaaladda Muqdisho .
Falkaan waxaa uu ahaa mid lagu doonayey in ammaanka lagu carqaladeeyo, waxa ay Dowladdu u mahad celineysaa askartii geesiyaasha ahayd shalay ka hortagtay falka dhagar qabayaashu doonaayeen in ay shacabka ku waxyeeleeyaan.
Aad iyo Aad ayey Dowladda Soomaaliyeed uga xuntay falka noocaan oo kala ah, weerarka fashilka ah waxa uu ahaa mid lala damacsanaa in lagu carqaladeeyo ammaanka iyo rajada jirta, tani waxa ay muujineeysaa fashilka kooxda iyo waqtikoodii oo dhammaaday.
Sidaa darteed waxaa ay Dowladda Soomaaliyeed ugu baaqeeysaa dadka falalka noocaani fulinaya iyo kuwa soo qaldayba in ay ka waantoobaan nabadduna nala qaataan, shacabka Soomaaliyeedna waxaannu leenahay haka feeljignaadeen falalka guracan ee dhagar qabayaashu fulinayaan, Shacabka iyo Ciidamaduna hawada shaqeeyeen.
Ugu dambeeyntii Waxaanu Allaah Uga baryeeynaa in uu caafimaad buuxa siiyo askartii iyo dadkii kale ee ku waxyeeloobay weerarkii laga hortegay oo ay naftooda haligayaashu la damacsanaayeen shacabka Soomaaliyeed.
Source: Xafiiska Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya.